Fuula cancala Taatewwan irratti maakiroo gara taatewwan dirree too'annoo unkaawwanii keessatti argamanitti geessisuu dandeessa.
Baafata halqaraa maalimaa bifa filatamee bani,- Cancala Too'annoo - Mudatoota fili
Kamshaa Unka Too'atannootaa yookin Unka saxaxa bani, Cancala sajoo Too'annoo - Mudatoota fili
Too'annoo irratti hundaa'ee,taatewwan gara garaa ni argamu. Taatewwan too'annoo filamee fi halqara fuula cancala Taatewwan irratti tarreeffaman qofa. Taatewwan asiin gadii ibsaman:
Taaten kun osoo gochi cuqaasa too'annootin kaka'in dura iddoo qabata. Fakkeenyaaf, qabduu "dabarsi" cuqaasun gocha ergiinsaa kakaasa; haa ta'uu malee, adeemsi "erguu" dhugaa kan eegalu weyta taateenYeroo kaka'umsaa argame qofa. Taateen Eegaliinsa duraa adeemsa ajjeessuu ni hayyama. Yoo tooftaan koronyate SOBA duubatti erge, Weyta kaka'umsaa hin hojjatamu.
The yeroo jalqabu weyta gochi jalqabu taateen ni mul'atu. Fakkeenyaaf, yoo qabduu "submit" jedhu unkaa kee irraa qabaatte, Ademsi erguu gocha kaka'umsaa bakka bu'a.
kan Jijjiirame taateen iddoo kan qabatu weyta too'annoon xiyyeeffannoo dhabe fi too'annoon too'annoo kan jijjiiramu yeroo xiyyeeffannoo dhabedha.
The Barruu fooyyeffame taateen iddoo kan qabatu yoo barruu dirree naqatti galchite ykn fooyyessite.
Haalojii maalimaa jijjiirame
Weyta xiyyeeffannoo fudhatu
Taateen Weyta xiyyeeffannoo fudhatu kan iddoo qabatu yoo dirreen too'annoo xiyyeeffannoo fudhate.
Weyta xiyyeeffannoo gatu
Taateen Weyta xiyyeeffannoo gatu kan iddoo qabatu yoo dirreen too'annoo xiyyeeffannoo gate.
Taateen Furtuu dhiibame kan argamu weyta dhimmamaan furtuu kamiyyuu dhiibe hanga too'annoon xiyyeeffannoo qabutti. Taateen kun gara maakiroo galfatawwan raggaasisuuf koronyaa'uu danda'a.
Taateen Furtuu gaddhiifame kan argamu weyta dhimmamaan furtuu kamiyyuu gaddhiisu battaluma too'annoo xiyyeeffannoo qabuuni.
Taateen Hantuutee keessaa iddoo kan qabatu yoo hantuuteen dirree too'annoo keessa ta'e.
Hantuuteen ni siiqfama yeroo furtuun gadqabame
Taateen Hantuuten kan siiqsamu weyta furtuun dhiibame iddoo kan qabatu weyta hantuuten harkifame battalumaan dhiibame. Fakkeenyi weyta, yeroo harkisii dhiisi, furtuun dabalataa haalata tilmaama (siiqsi ykn garagalchi).
Taateen Hantuutee siiqsamee kan argamu yoo hantuuten too'annoorra siiqsame.
Qabduu Hantuutee gad qabame
Taateen Qabduu hantuutee dhiibame kan argamu yoo qabduun hantuutee dhiibame qareen hantuutee battalumaan too'annoorra oola.
Qabduu Hantuutee gad dhiifame
Taateen Qabduu hantuutee gaddhiifame kan argaman yoo qabduun hantuutee gaddhiifame qareen hantuutee battalumaan too'annoorra oola.
Taateen Hantuutee alaa iddoo kan qabatu yoo hantuuteen dirree too'annoo keessa ta'e.
Taateen haaromsa dura kan argamu qabiyyeen too'annoo kan jijjiiraman gara madda deetaa dhimmamaan barreeffaman dura. Maakiroon koronyate kan danda'u, fakkeenyaa, gocha "SOBA" deebisu kana ittisuu.
Taateen haaromsa dura kan argamu qabiyyeen too'annoo kan jijjiiraman gara madda deetaa dhimmamaan barreeffaman dura
Taateen Durtii haaromsaaf argaman unkaan haaromfamne dura. Maakiroon koronyate kan danda'u, fakkeenyaa, gocha "SOBA" deebisu kana ittisuu.
Taateen Haaroomfama booda kan argaman eega unkaan haaromfamee booda.
Title is: Taatewwan